🥇 ▷ ScreenshotGo: waa barnaamij leh sirdoon aan dabiici ahayn oo ku socda shaashadda Firefox-kaaga ✅
ScreenshotGo: waa barnaamij leh sirdoon aan dabiici ahayn oo ku socda shaashadda Firefox-kaaga
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa app xiiso leh oo sirdoonka macmalka ah loo yaqaan ScreenshotGo, waxaa abuuray shirkadda khuraafaadka ee Firefox. Sida aan ogsoonahay, shirkadani ma ahayn kuwa ay dad badani jecel yihiin markii aan kahadalno biraawsar, laakiin weli ma aysan yaqaanaan ereyga dhiibitaan; iyo dhowaan waxay go’aansadeen inay bilaabaan Horudhac; biraawsar biloow oo aan horay uga hadalnay dabcan waana tijaabinay. Waxaan kaaga tageynaa xiriiriyaha si aad u ogaato waxaana laga yaabaa inuu xitaa kuu noqdo biraawsarkaaga khaaska ah.
Sikastaba, taasi waa mowduuc kale, maantana aan kuu soo qaadanno ScreenshotGo oo ku jihaysan maareynta shaashadda. Laga yaabee xilligan aad u aragto inay tahay wax faa’iido ah ama Ma ahan wax qiimo leh, laakiin waxaan kugu casuumeynaa inaad fiiro gaar ah yeelato; maadaama hawlahoodu kaa dhigayaan hadal la’aan.
ScreenshotGo qabsashadaada waxay aadi doontaa heerka xiga
Firefox aad ayuu u ogyahay inay si fiican u buuxineyso nusqaamahaas taas oo mararka qaar dhacda nolosheena maalinlaha ah, xitaa kuwa aan ku fikirnay in aanan u baahnayn. Halkaas ScreenShotGo ayaa soo baxa; Codsigan sida kor ku xusan si fudud u raadso dhammaan waxyaabahayaga shaashadda, iyo haddii aad aniga oo kale tahay oo aan waqtiga oo dhan ku qaato qabashada maalinta; midkoodna sababtoo ah adiga Waxaan u soo jiitaa mowduucyo muhiim ah, sida cuntada, ama cinwaanka sheekada: waxaana had iyo jeer dhacda inay jiraan kuwa aad u tiro badan Ugudambeyn ma ogi meeshuu yahay. Xalku wuxuu ku jiraa gacantaada gacanta waxaanan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa soo degsashada barnaamijkan ee ku jira Dukaanka Google Play, taas aawadeed waxaan uga tagi doonaa xiriiriyaha halkan. Goor dambe markii la furo waxay ku weydiin doontaa inaad marin u hesho bartaada, tan Waa lagama maarmaan in la raadiyo sawirro. Kadib si otomaatig ah ayey u muuqan doontaa dhammaan shaashadda Waxaan horey u aragnay in sirdoonka macmalku socdo, maadaama midkoodna muuqaallada sawirradu muuqan.
Algorithms in isku dhafan ScreenshotGo waa aasaasi aadna waxtar u leh dhinacan. Laakiin tani waa uun asxaabta bilowga ah, sida aan u sheegnay waad yeelan kartaa malaayiin laqabtay taasoo adkaynaysa in la helo; laakiin laga yaabee inaad xasuusato mid aad ka sameysay wararka qaar, halka aad u baahan tahay oo keliya inaad dhigatid eray u eg muuqaalkaas, oo isla markiiba ah Sawir aad saacado sugaysay. Ma yaabbaa? Codsigu wuxuu kaloo aqoonsan yahay qoraalada sawirku yeelan karo, Iyo waxa ugu fiican waa inaad ka soo saari karto, koobi kartid oo aad ku dhajin kartid halka aad rabto.
Xaqiiqdi, Firefox wuxuu la taagan yahay sharadkan xiisaha leh of app leh sirdoonka macmal, taas oo xitaa muhim u noqon karta nolol maalmeedkayaga.
La kulan wararkii ugu dambeeyay adduunka ee teknolojiyadda, ku biir Club Tech at Twitter – Facebook – Telegram
IPad 11 Pro wuxuu lahaan lahaa codsi wanaagsan oo ku saabsan boos celinta
Asalka YouTube-ka ayaa lahaan doona taxane taageeran lacag la’aan ah
Nokia waxay diyaarisaa mooto rakhiis ah oo 5G ah! Waxay imaan doontaa 2020
OnePlus TV wuxuu isku dari doonaa 8 ku hadla iyo taageero loogu talagalay Dolby Atmos
vBulletin: dalool weyn oo amniga amniga ah ayaa lagu xiray barnaamijka kombuyuutarka
qiimaha suurogalka ah ee Europe sifeeyo »-